Mila ezaka ny fifehezan’ny ankizy ny teny frantsay, sy ny kajy any amin’ny taona fahadimy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mila ezaka ny fifehezan’ny ankizy ny teny frantsay, sy ny kajy any amin’ny taona fahadimy
Willy Rasolonjatovo il y a 12 jours
Nofaranana ny zoma 10 jona 2022 teny Alarobia ny atrikasa nentina nampahafantarana ny vokatry ny fanadihadiana progamme d’analyse du système éducatif de la Confemen (Pasec).
Fampahafantarana vokatry ny tombana natao tao anatin’ny tontolon’ny fanabeazana teto Madagasikara tamin’ny taona 2019. Tombana mahakasika ny fahaizan’ny ankizy mamaky teny Malagasy, teny frantsay, ny kajy. Tombana ihany koa mahasika ny fahaizan’ny mpampianatra mifehy ireo taranja isan-karazany, ny fahaiza-mampianatra. Raha ho an’ireo ankizy any amin’ny taona faharoa dia tsara ny vokatra satria ny antsasa-manilan’ny ankizy malagasy izay nanaovana ny fanadihadiana dia mahafehy ny tenin-dreny, ny teny malagasy any an-tsekoly. Amin’ny kajy indray dia ny ¾ ny ankizy any an-tsekoly amin’ny taona faharoa dia mahafehy ny kajy mifanadrify amin’izay. Ny any amin’ny taona fahadimy dia hita taratra fa mila ezaka. Mila ezaka satria somary latsaka ny fifehezan’ny ankizy ny teny frantsay, sy ny kajy. Tahaka izay ihany koa ny mahakasika ny mpampianatra. Ny 11% ny mpampianatra izay nanaovana izany fanadihadiana izany no mahafehy ny teny frantsay. Ny 33% n’izy ireo no mahafehy ny kajy. « Izay no mahatsara ny fisian’itony vokatry ny fanadihadiana itony. Ahafahana mahita ny lesoka tokony hatsaraina sy ny filàna amin’izany sehatra izany, toy ny fotodrafitrasa an-tsekoly, fanomezana manuel scolaire, ny fampitomboana ny isan’ny mpampianatra ho mpiasam-panjakana, fanomezana fampiofanana ho an’ny mampianatra, satria somary latsaka ny antontanisa mahakasika an’izay, tafiditra tanteraka amin’ny tontolon’ny fanatsarana ny fanabeazana izany rapport Pacep izany.» Hoy Rtoa SAHONDRARIMALALA Marie Michelle, minisitry ny fanabeazam-pirenena.
Toy ny isan-taona dia mbola hisy ny fanadinam-panjakana Cepe amin’ity taona ity hotanterahana amin’ny 21 jona. Efa ao anatin’ny fanomanana izany fanadinana izany ireo miandraikitra izany ankehitriny, taranja iray sisa no tsy vita ny fanontana ny laza adina. Ary ny Bepc kosa dia hotanterahana manomboka ny 4 jolay.
Maro ireo mpiandraikitra eo amin’ny fanabeazana eto amin’ny Firenena nanatrika izany fotoana fampahafantarana izany, izay notarihan-dRtoa Minisitry ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka isan-karazany. Raha izay no zava-misy talohan’ny taona 2019, ahiana ho ratsy no izany ny zava-misy taorian’ny fikorontanana nateraky ny valan’aretina Covid-19.
Fanabeazana : Mila ezaka ny fifehezan’ny ankizy ny teny frantsay, sy ny kajy any amin’ny taona fahadimy - il y a 12 jours
Education : Airtel Madagascar, Mass’in et Rotary club Ivandry, s’engagent en faveur de l’éducation - il y a 15 jours